HomeWararka Ciyaaraha MaantaMaxaa ku soo kordhay: Arsenal iyo Wararka Suuqa kala iibsiga ee Bisha January
January 29, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Ingiriiska, Maxaa ku soo kordhay, Suuqa kala iibsiga 0
Maxaa ku so kordhay Arsenal
Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa magacaabay boosaska Martin Odegaard uu ka ciyaari karo ka dib markii uu amaah uga keenay ciyaaryahankan kooxdA Real Madrid
Hibs Josh Doig
Labada Kooxood ee Arsenal iyo Chelsea ayaa xiiseynaya Hibs Josh Doig oo daafaca ka ciyaara una dhashay Scotland waxana labada kooxood maamulkooda bilaabeen xiriirka kooxda Hibernian FC si ay u helaan daafacan da’da yar.
Real Madrid ayaa ka fiirsaneysa inay dib ugu yeerto Brahim Diaz, oo ku sugan Manchester City, si ay ugu bedesho wiilka cusub ee Arsenal Martin Odegaard, sida laga soo xigtay Don Balon .
Xiddiga Arsenal ee Mustafi ayaa loo magacaabay saxiix ahaan booska dhexe ee daafaca ee Liverpool u baahan tahay inay eegto kadib markii kulankii ugu danbeeyay ay kooxda heshay dhaawacyo cusub oo daafaca ah.
West Brom ayaa rajeyneysa inay heshiis amaah ah kula wareegto da ‘yarka Arsenal Ainsley Maitland-Niles inta ka dhiman xilli ciyaareedkan, sida laga soo xigtay The Athletic .
The Athletic ayaa aaminsan in West Brom ay dooneyso inay u soo bandhigto fursadaas, iyadoo ay jiraan afar kooxood oo kale sida Leicester City.
Xulushada ka socota Arsenal kulamadii ugu danbeeyay ee lagu doortay wiilashada yar yar ayaa keentay in Xaalada ku sii huriso Willian iyo kuwa lamid ah iyadoo taasi ay keeni karto in xidigan uu kooxda ka tago.